Head နှင့် Shoulders ပုံစံအတွက် အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာ
နည်းပညာသုံးသပ်ချက်တွင်၊ ဈေးနှုန်းအတွက် ရှေ့ဆက်လားရာကိုဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးမည့် မတူညီသော ဇယားပုံစံများရှိကြပါသည်။ ကျယ်ပြန့်သောအသိတွင်၊ ဤပုံစံများအားလုံးအား ကြီးမားသည့်အုပ်စုနှစ်ခု ခွဲထားပါသည်: ဈေးပြောင်းပြန်နှင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသောဇယား ပုံစံများ။ ကျွန်တော်တို့ Forex လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင် ယင်းတို့အား မည်ကဲ့သို့ဖွင့်ဆိုရမလဲ လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ယနေ့၊ အသိအများဆုံးပုံစံများထဲမှ တစ်ခုအတွက် အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာကို တင်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ Head နှင့် Shoulders ပုံစံများကိုပြောနေတာပါ။
“Head and Shoulders”ဆိုတာကို ကြားတာနဲ့ သင့်စိတ်ထဲဘာပြေးမြင်လဲ? သင်အနှစ်သက်ဆုံး ခေါင်းလျှော်ရည်နံ့လို့ထင်ရင်တော့၊ သင်သေချာမရောင်းဝယ်ရသေးပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦး၏ စိတ်ထဲရောက်လာသည့် ပထမအရာမှာ၊ နာမည်ကျော်ဈေးပြောင်းပြန်ပုံစံဖြစ်သည်။
“Headနှင့် Shoulders" ပုံစံသည် အတက်ဈေးလမ်းကြောင်း အဆုံးတွင်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ မည်သည့်အချိန်ကာလတွင်မဆို အလွယ်တကူတွေ့ရနိုင်သည်။ ၎င်းအား အမြင့်ဆုံးတစ်ခု (ပထမ shoulder)၊ ပိုမြင့်သော အမြင့်မှတ် (head) နှင့် ပိုနိမ့်သော အမြင့်မှတ် (ဒုတိယ shoulder)ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဘယ်ဘက် shoulder နှင့် head၏ အနိမ့်ဆုံးချင်းဆက်ချင်းအားဖြင့် "လည်တိုင်"တစ်ခု ဆွဲနိုင်သည်။ လည်တိုင်သည် ရေပြင်ညီမျဉ်းမဖြစ်သင့်ပါ။ ၎င်း၏လျှောသည် အထက်(သို့) အကျဖြစ်နိုင်သည်။ လျှောကျဆင်းပါက၊ ပုံစံသည် ပိုစိတ်ချရသည့် အရောင်းအချက်ပြချက်ကို ပေးသည်။
အကျဈေးလမ်းကြောင်းအတွင်း ရောင်းဝယ်ပါက၊ ဇယားတွင် ဈေးပြောင်းပြန် Head နှင့် Shoulders ပုံစံအတွက် ကြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤပုံစံသည် ရှေး Head နှင့် Shoulders ပုံစံနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး၊ အတက်ဈေးပြောင်းပြန်ဖြစ်မှုကို အချက်ပြနိုင်သည်။
- ဈေးနှုန်းသည် လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေအတွက် မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် မြင့်လာသည့်အလျောက် အတက်များသည် ဈေးလမ်းကြောင်းတွင် လိုက်ပါရတာပင်ပန်းလာသည့်အခါ၊ အကျများတစ်လှည့်ကစားလာပြီး၊ ဈေးနှုန်းကိုဆွဲချရန်ကြိုးစားကြသည်။ ဈေးနငန်းသည် အဆင်းဘက်ကို စမ်းသပ်ပြီး၊ ပြန်ခုန်ထွက်လာပါက၊ ၎င်းသည် ပုံစံ၏ ဘယ်ဘက် shoulderကို ဖန်တီးပေးသည်။
- ထို့နောက် အတက်(bull)များသည် ဈေးနှုန်းကိုပိုမြင့်အောင် တွန်းရန်နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုလုပ်ကြသည်။ ၎င်းသည် ပုံစံ၏ "head" ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
-သို့သော် အတက်များသည် ထိုအမြင့်အဆင့်တွင် ဈေးနှုန်းကို မထိန်းထားနိုင်ဘဲ၊ အကျ(bear)များသည် လည်တိုင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဈေးနှုန်းအား ပြန်ကျစေသည်။
-"ကောင်းပြီ၊ ခုဆို ဒီချိုနဲ့သတ္တဝါတွေဟာ လုံးဝအရှုံးပေးလိုက်ကြပြီ" ဟု - သင်တွေးခဲ့မည်။ သင်မှားပါတယ်။ ဝယ်သူများသည် သူတို့၏ ပိုအားနည်းသောအင်အားနှင့် ဈေးနှုန်းအား အမြင့်အသစ်ကိုတွန်းရန်ထပ်ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော် ဒီအမြင့်သည် "head"ထက် ပိုနိမ့်ပြီးထွက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ပုံစံ၏ ညာဘက် shoulderဖြစ်သည်။
- ထို့နောက် အကျ(bear)များသည် ပြန်နေရာယူပြီး၊ ဈေးနှုန်းကိုပိုနိမ့်အောင် ဆွဲပြန်သည်။ သူတို့၏ ဖိအားသည် အားအရမ်းကောင်းပြီး လည်တိုင်ကိုချိုးဖောက်ရန် စီမံကြသည်။
- တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဈေးနှုန်းသည် ပိုနိမ့်သောပမာဏနှင့် ထပ်မံတက်သွားနိုင်ပြီး၊ လည်တိုင်ကို ပြန်စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။ ဤအသေးစားမြင့်တက်မှုသည် လည်တိုင်အထက်တွင် stop lossထားပြီး ရေတိုအော်ဒါလေးတစ်ခုဖွင့်ရန် အခွင့်အရေးပေးပါသည်။ သို့သော် ထိုအနေအထားသည် Head နှင့် Shoulders ဖြစ်ပေါ်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်တော့မဟုတ်ပါ။
- အကျ(bear)များသည် ဈေးနှုန်းကို ပိုဝေးဝေးဆွဲချပါသည်။
Heads နှင့် Shouldersပုံစံကို ရောင်းဝယ်ရန် မြောက်များစွာသောဗျူဟာများရှိပါသည်။ အလွယ်ဆုံးတစ်ခုနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ အောက်တွင်စာရင်းပြုစုထားသော ဗျူဟာများသည် အားလုံးနှင့်ပတ်သတ်ပါသည်: ယင်းတို့အား မည်သည့်ငွေကြေးအတွဲ၊ စတော့ (သို့) ကုန်စည်များအတွက် မည်သည့်အချိန်ကာလတွင်မဆို အသုံးပြု၍ရပြီး၊ ယင်းတို့အတွက် ထပ်လောင်းအညွှန်းကိန်းများ မလိုအပ်ပါ။
၁။ ပုံစံ အကောင်ထည်ပေါ်ရန် စောင့်ပါ။ ပုံစံ လုံးဝအပြည့်မဖြစ်ပေါ်ခင်ထိ မည်သည့်အရောင်းအဝယ်မှ မယူပါနှင့်။
၂။ candlestickမှ လည်တိုင်အား အဆင်းဘက်သို့ ချိုးဖောက်သွားရန်စောင့်ပါ။
၃။ အရောင်းအော်ဒါအား လည်တိုင်အောက်တွင် အနည်းဆုံး ၃-၅ pipမှာ ထားပါ။
၄။ လည်တိုင်အထက် ၃-၅ pip stop loss ထားပါ။
၅။ အမြတ်ပစ်မှတ်အား ခေါင်းပိုင်းနှင့် လည်တိုင်အောက်ခြေကြားမှ ဈေနှုန်းကွာခြားချက်အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ထို့နောက် အဆင်းဘက် ဈေးနှုန်းပစ်မှတ်အား ပံ့ပိုးရန် ထိုကွာခြားချက်အား လည်တိုင်၏ ချိုးဖောက်မှုမှ နုတ်ထားသည်။
USD/JPYအတွက် ၄-နာရီ ဇယားကိုကြည့်ရအောင်။ Head နှင့် Shouldersပုံစံ အကောင်ထည်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
အတက်(bull)များသည် အမြင့် ၁၁၄.၅၄တွင် ဈေးနှုန်းမထိန်းထားနိုင်ပဲ၊ အတွဲသည် ၁၁၃.၅၆ရှိ လည်တိုင်အောက်သို့ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ၁၁၃.၅၁ရှိ ၎င်းအောက် ၅pip၊ လည်တိုင်ကိုဖောက်သွားပြီးနောက် အရောင်းအော်ဒါတစ်ခုဖွင့်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ stop loss ၅ pipအား ၁၁၃.၆၆ရှိ လည်တိုင်အထက်တွင် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အောက်ပါဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုပြီး အမြတ်ယူ(tp)အဆင့်ကို ရေတွက်ခဲ့ပါသည်:
၁၁၄.၅၄ ("ခေါင်း" ထိပ်ပိုင်း) – ၁၁၃.၅၆ (လည်တိုင်) = ၀.၉၈
အောင်မြင်ပါတယ်! သင် ၁၀၀ pipဝန်းကျင်လောက် ရခဲ့ပါပြီ!
ပြောင်းပြန် Head နှင့် Shoulders အတွက်လည်း ဤဗျူဟာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒီမှာအဆင့်များပါ:
၁။ ပုံစံအကောင်ထည်ပေါ်ရန် စောင့်ပါ။
၂။ အထက်ပိုင်းတွင် candlestickမှ လည်တိုင်ကိုချိုးဖောက်ရန်စောင့်ပါ။
၃။ လည်တိုင်အထက် အနည်းဆုံး ၃-၅ pipတွင် အဝယ်အော်ဒါထားပါ။
၄။ လည်တိုင်အောက် ၃-၅ pipတွင် stop loss ထားပါ။
၅။ ခေါင်းပိုင်းနှင့် လည်တိုင်အောက်ခြေကြားမှ ကွာခြားချက်အဖြစ် အမြတ်ပစ်မှတ်အား သတ်မှတ်ပါ။
USD/CAD၏ H4ဇယားတွင် Head နှင့် Shouldersပုံစံကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ လည်တိုင်သည် လုံးဝပြည့်စုံခြင်းမဟုတ်ပေမယ့် ၎င်း၏ဆင်ခြေလျှောသည် အထက်တက်သွားကြောင်း ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါသည်၊ ဈေးလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည် stop lossအား ၁.၂၆၅၃တွင်ထားပြီး၊ လည်တိုင်၏ ချိုးဖောက်သွားမှုအတွက် စောင့်ဆိုင်းပါသည်။ Candlestick ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၊ ၁.၂၆၆၃တွင် အော်ဒါအရှည်တစ်ခုဖွင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အမြတ်ယူ (TP)ကို ရေတွက်ပါသည်:
၁.၂၆၅၈ (လည်တိုင်) - ၁.၂၅၂၈ (ဦးခေါင်း) = ၀.၀၁၃၀
ဤဗျူဟာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ သင် ၁၃၀ pipများရပါသည်။
Headနှင့် Shoulders ပုံစံသည် ဇယားတွင် သိသာပြီး၊ ကန့်သတ်ထားသောဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ အမြတ်ရသောအရောင်းအဝယ်အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
17.01.2019 16:06 တိုတောင်းပြီး မထင်ရှားသော ပြန်မတ်လာမှုနှင့်အတူ အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာ
သင်အနှစ်သက်ဆုံး ငွေကြေးအတွဲကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အကျ(bear) ဈေးကွက်တွင် ရောင်းဝယ်သည်ဟု တွေးကြည့်ပါ။